'Amaphara' afake izisebenzi zikamasipala enkingeni | News24
'Amaphara' afake izisebenzi zikamasipala enkingeni
eThekwini - Basebenza kabuhlungu abasebenzi bakaMasipala weTheku behlukunyezwa ondingasithebeni abatshontsha impahla yabo.
Lokhu kwaqala ngesonto eledlule ngesikhathi umasipala eqala umkhankaso wokukhuculula idolobha iPinetown lapho bekuxoshwa khona abadayisa emgwaqeni ngaphandle kwemvume.
Ngesikhathi bematasa abasebenzi bakamasipala ngalokhu, izinswelaboya lezi ezihlala emgwaqeni bezizisiza ngempahla yalaba abaxoshwayo.
Ngokusho kukaMasipala weTheku ngesitatimende abasithumelele abezindaba, baphume umkhankso wokuqeda abantu abadayisa ngaphandle kwezimvume zokuhweba.
Lokhu sekufaka izisebenzi ezishanela ezitaladini zasePinetown kwenkulu inkinga.
Esinye sezisebenzi sitshele abeZindaba24 ukuthi abadayisi bawotha ubomvu njengoba "amaphara" ebe impahla yabo njengoba bebexoshwa lapho abadayisela khona.
OLUNYE UDABA: UMasipala weTheku uthi seyilungile inkinga yokukhokhwa kwezikweletu
“Kunzima mfowethu ngoba thina kasingene kule nto kodwa manje yithi esizithola singaphansi kwengcindezi ngento esingahlangene nayo. Omunye womama abadayisayo wasitshela ezikabhoqo ethi uma umasipala uphinda ubuya uzothatha impahla yabo bazoshaya thina,” kusho lesi sisebenzi esicele ukuba igama laso lingadalulwa.
Omunye wabadayisa emgaqweni owale waphetha ukutshela abeZindaba24 igama lakhe uthe kubuhlungu lokhu okubehlele ngoba sebezoba noKhisimusi omuncu njengoba bexoshiwe lapha abazizamela khona futhi kwebiwa nempahla abayidayisayo.
“Kunomuntu osigadela izimpahla njengoba siziqoqa sizibeke ndawonye, ngithuke kabi ngifika ekuseni kungekho ngisho ibhokisi elilodwa likabhanana.
"Okungithuse kakhulu wukuthi bengisanda kuthenga isitokwe sika-R7 000, ngiphuke kakhulu emoyeni ngeke ngikwazi ngisho ukuthengela izingane zami njengoba sekusondele uKhisimusi," kusho yena.
Uthi bezwa ngandlebenye ukuthi impahla yabo ithathwe ngamaphara ngemuva kokuthi babaleka bashiya izithunzi ngesikhathi uMasipala weTheku uxosha bonke laba abadayisa ngokungemthetho kuleli dolobha.